Nandamina raharaha sivily MAX i Boeing fa mbola mitohy ny fitsarana FlyersRights
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Nandamina raharaha sivily MAX i Boeing fa mbola mitohy ny fitsarana FlyersRights
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nandamina raharaha sivily MAX i Boeing fa mbola mitohy ny fitsarana FlyersRights.
Ny fianjeran'ny ET302, miaraka amin'ny fianjeran'ny Lion Air Flight 610, efa-bolana mahery talohan'izay, dia namoizana ain'olona 357.
FlyersRights.org dia manohy ny fitsarana azy, tohanan'ny manampahaizana manokana momba ny fiarovana ny fiaramanidina.
Ny tanjon'ny fitsarana FlyersRights dia ny hanery ny FAA hamoaka ny antsipiriany momba ny fanamboarana MAX sy ny fitsapana sidina.
Ny fanenjehana an'i Boeing amin'ny FlyersRights.org dia ho iray amin'ireo fomba vitsivitsy hahazoana ny fahamarinana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fianjeran'ny 737 MAX.
Nandamina ny raharaha sivily ny Boeing tamin'ny fianakaviana rehetra afa-tsy ny roa tamin'ireo niharam-boina tamin'ny fianjeran'ny Ethiopian Airlines Flight 302 Boeing 737 MAX tamin'ny 10 martsa 2019. Ny fianjerana ET302, niaraka tamin'ny fianjeran'ny Lion Air Flight 610, efa-bolana mahery talohan'izay. , namoy ny ainy 357.
FlyersRights.org, na izany aza, dia manohy ny fitsarana azy, tohanan'ny manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana, hanery ny FAA hamoaka ny antsipiriany momba ny fanamboarana MAX sy ny fitsapana sidina. Ny FAA, amin'ny BoeingNy baikon'i, dia nanafina ny angon-drakitra rehetra mifandraika amin'ny MAX eo ambanin'ny fitakiana tsiambaratelo ara-barotra, na dia eo aza ny fampanantenana maro nataon'ny Boeing sy ny FAA momba ny mangarahara tanteraka.
Boeing dia niaiky ho tompon'andraikitra amin'ny onitra onitra vokatry ny fianjeran'ny Ethiopian Airlines Flight 302, ary ny fianakavian'ireo niharam-boina dia mety hitady onitra any Illinois. Na izany aza, ny fifanarahana dia mandrara ny fanimbana fanasaziana, fanimbana izay mety hanasazy an'i Boeing noho ny fitondran-tena ratsy ary mety hanakana an'i Boeing sy ny hafa amin'ny fihetsika toy izany amin'ny ho avy.
“Ity fandriampahalemana ity dia midika fa ny FlyersRights.org fitsarana manohitra Boeing ho iray amin'ireo fomba vitsivitsy hanatrarana ny fahamarinana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fianjeran'ny 737 MAX,” hoy i Paul Hudson, Filohan'ny FlyersRights.org. "Tamin'ny fanalavirana ny fahitana sy ny fametrahana ireo raharaha sivily ireo, ankoatra ny fialana amin'ny fitsarana heloka bevava sy ny sazy lehibe amin'ny fifanarahana nataony tamin'ny governemanta federaly, i Boeing dia nandositra tamin'ny tehamaina fotsiny raha oharina amin'ny haben'ny orinasa sy ny habeny. amin’ny faharatsiany”.
Marihina fa manantena i Boeing fa afaka misoroka ny fametrahana ny CEO David Calhoun, ny tale jeneralin'ny teo aloha Dennis Muilenburg, ary ny mpiasa hafa. Boeing dia nanaiky ny fifanarahana fanenjehana tamin'ny Departemantan'ny Fitsarana tamin'ny Janoary 2021, nandoa lamandy 244 tapitrisa dolara nefa tsy niaiky ho meloka.